Amagqwetha angxamisekileyo kunye namaGqwetha | IiFemu zoMthetho eDubai
Izomthetho ziQinisekisa iDubai
Bhalela thina apha icala@lawyersuae.com | Izingcingo ezingxamisekileyo + 971506531334 + 971558018669
Inguqulelo kwezomthetho (IsiArabhu)
Fumana igqwetha elifanelekileyo kwi-UAE
Jonga iimeko zamatyala olwaphulo-mthetho kwi-UAE
Ukuvalelwa / ukufundelwa kwisikhululo seenqwelomoya
I-WILLS eyodwa / I-WILLS Eqwalaselweyo
Ilifa kunye nokuKhangela
Iikontraki zoqhawulo mtshato
AmaGqwetha aphezulu oLwaphulo-mthetho
UMthetho woLwaphulo-mthetho uyachazwa
Ukujonga aMatyala oLwaphulo-mthetho
Amatyala okuGqibela ngeMali
Ukuxhatshazwa ngokwesondo Imithetho ye-UAE
Ukongezwa kunye noMthetho we-Intl
Khusela isicelo soKwandiswa
Kukhutshwa iZaziso eziBomvu eziqhelekileyo
Iingcamango ezingezizo zeInterpol
Ukuxhatshazwa kuLwaphulo-mthetho e-UAE
Isohlwayo ngokuthengisa iziyobisi
Zilwe Izityholo Zobuxoki
Isohlwayo Ngobundlobongela Basekhaya
Ubusela beZazisi kunye nobuqhophololo
Isohlwayo ngenxa yokuSela nokuQhuba
Amabango okwenzakala okuphezulu
okuyinkqubo egwenxa Medical
Igqwetha lomntu owonzakeleyo
Ummeli weBango leInshurensi
Iingozi zeenqanawa zokuhamba ngenqanawa
Sela kunye neDrive
I-DIFC, uLamlo, uLwandle
Iimpazamo eziqhelekileyo kuLamlo
Isikhokelo kuMthetho woLamlo
Sebenzisa umthetho wokulamla
Igqwetha leeNkonzo zoLwandle
Umthetho waselwandle kwi-UAE
Imicimbi yoMthetho waseLwandle wase-UAE
Iimpazamo zoMthetho waselwandle
Ukusombulula Iimbambano Kwishishini
Isisombululo sokuBuyisa ityala
IiNkonzo zoMthetho woMgcini
Iingcebiso kwiSivumelwano soGcino
Izindlu / amatyala ezindlu
Thenga ipropathi eDubai
Iingxabano zoMqeshisi kunye nabaqeshisi
Phumelela ityala lakho negqwetha elifanelekileyo
Impumelelo kwityala lenkundla ibhekisa kwisiphumo esamkelekileyo. Nokuba ungummangalelwa okanye ummangalelwa, uyakufuna ukudlala amakhadi ophathweyo ukuze uzuze.
Fumana igqwetha kwiziphumo eziqinisekisiweyo ze-UAE
Siyila izisombululo ezenzelwe wena kwaye sizise izisombululo zomthetho ezifanelekileyo ozifunayo. Sizibophelele ekutsaleni, ekufundiseni nasekugcinweni kwelona gqwetha libalaseleyo.
Zikhusele, usapho lwakho, izihlobo zakho kunye namaqabane akho
Abathengi bethu bavakalise izibonelelo abazonwabelayo ngokusebenza nomzi-mveliso omkhulu ngokwaneleyo ukubonelela ngeenkonzo zomthetho kwikona nganye ye-UAE, kodwa incinci ngokwaneleyo ukuba ibanike ingqwalaselo yabo efanelekileyo.
Inyathelo elinye ngaphambili
Ujoliso lweNqila oluqinileyo
Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants (Amagqwetha e-UAE) yifem yomthetho egxile kuyo WoLwaphulo mthetho kwaye une AmaGqwetha oLwaphulo-mthetho abalaseleyo eDubai, uMthetho woKwakha, uMthetho woShishino, uMthetho wezindlu nezindlu, uMthetho woSapho, uMthetho woShishino kunye noRhwebo kunye noSombululo lweMbango ngokuLawulwa nokuTyalwa.
Isekwe eDubai, e-Abu Dhabi, e-UAE nase-Saudi Arabia iarhente yezorhwebo, urhwebo kunye nehabhu yorhwebo kuMbindi Mpuma, indawo esihlala kuyo kunye nomxube wobungcali kwezomthetho ibhulorho phakathi kweMpuma neNtshona.
Inkonzo yomthetho eQinisekileyo
IBhulorho yakho yokuphumelela kwezomthetho
Amagqwetha asekhaya nawezizwe
Ukumela abaThengi ngaphakathi
Ingcali kwiMigangatho eyahlukeneyo yoMthetho
Ingcali kwi-UAE kunye noMthetho weSharia
Ukucaciswa okusemthethweni kunye noncedo olungxamisekileyo
Izixazululo eziNtsha neziYilayo
Ukuphatha iimeko ezinkulu kunye neeMeko eziNzima
Ukulamla okuLula phakathi kweNkampani
Afumaneke onke Amagqwetha eeLwimi
Sibona abaThengi bethu njengaDlelane nabo
Ukusetyenziswa kwewebhu ngokuSisiseko
Ukunikwa kwengxelo yewebhu kwabaThengi
Ukumelwa kwiiNkundla ze-UAE
Iminyaka elishumi yamava
Uphando olugcweleyo lwezoMthetho
Abacebisi kwezomthetho kunye nabameli
Iimbambano zeshishini, ukungabinamali, ukungabinamali, ukuguqulwa kweNkampani, iikontrakthi, izivumelwano, ukuhanjiswa.
Izenzo zolwaphulo-mthetho, ulwaphulo-mthetho, ukukopela, ukuhlukunyezwa, ubuqhetseba, ubugebenga, ukuhlaselwa, impatho gadalala, ukubulala kunye nobundlobongela.
Ukuthengiswa kweNdawo yokuhlala, ukuThengisa kunye nezivumelwano zokuthenga, ukuSonjululwa kwembambano, ukuLungiswa kunye nokuLawulwa.
Igqwetha losapho, amaGqwetha aMtshato aHloniphekileyo, Abameli boMntwana oGxothiweyo, amaGqwetha aokwahlula-hlula, izivumelwano zoqhawulo mtshato.
Umthetho wezorhwebo, umthetho weMercantile, umthetho waseburhulumenteni, ukuqokelelwa kwamatyala, ukubuyisela imali, ukurhweba ngokungekho mthethweni
Amatyala amabango okwenzakala
Amabango okwenzakaliswa kweengozi zeMoto, iimeko zeMalpractice yoNyango kunye nokungaKhathalelwa, ukuNgena ngokuBi kunye neBango le-Inshurensi.
Ukuxhaphaka kweziyobisi ezingekho mthethweni kwi-UAE, ukulwa nokuthenga kunye nokuthengisa iziyobisi, ufundiswe ngamachiza e-narcotic. Ulwaphulo lweziyobisi.
I-Maritime, umthetho we-Admiralty, ukuHambisa okanye iziphoso ezenzeka kumanzi avulekileyo. Imigaqo yehlabathi kunye noMthetho wolwandle.
Ukurhwaphiliza ngemali kuqala ngokuhambisa imali yolwaphulo-mthetho ibe ngumthombo osemthethweni wengeniso.
AmaGqwetha, amaGqwetha kunye nabaCebisi boMthetho
I-Dubai, i-Abu Dhabi, i-Sharjah, i-UAE
Adv. U-Mohamed Abdulla Al Obaidli
UmGqwetha onamava aphezulu kunye noMcebisi wezoMthetho
Adv. USaud Abdulaziz Al Zarooni
Umcebisi onamava kwezomthetho
IGqwetha kunye noMcebisi wezoMthetho
UGqr. Salma Abbas Ahmed
Umcebisi wezoMthetho Jikelele uMthetho
UMcebisi wezoMthetho oPhezulu
U-Mohamed Abu Alhamd Ahmed Elsayed
UWalid Ahmed Allam
UGamal Mohamed Ibrahim
Cofa apha ukuze ujonge onke amaGqwetha ethu kunye namaGqwetha e-UAE
Inkonzo yethu yezomthetho yobungcali ihlonitshiwe kwaye yamkelwe ngeembasa ezikhutshwe ngamaziko ngamaziko. Ezi zilandelayo ziwongwa kwi-ofisi yethu kunye namahlakani ayo ngokugqwesa kwawo kwiinkonzo zomthetho.
3 Amanyathelo alula ukuze uzuze ityala lakho
Siza kukunceda onke amanqanaba endlela
Sukufumana nje naliphi na igqwetha-Fumana iGqwetha elifanelekileyo. Ingcebiso esemagqabini yezomthetho evela kumagqwetha anamava kunye nawodwa.
ukufunda ngayo yonke imiba yakho yezomthetho
Chaza imeko yakho okanye imeko yakho, ucacisa ngokufutshane iinkxalabo zakho. Nayo nayiphi na imifanekiso, i-imeyile okanye amaxwebhu inokubonelelwa.
Uvavanyo lwetyala, iNgcebiso ngezoMthetho kunye noXwebhu
Igqwetha lethu elikhethekileyo liya kucacisa imeko yezomthetho, amalungelo akho, kunye nezibophelelo kunye namathuba akho kunye neengozi zakho.
Silwela wena enkundleni
Phumelela ityala lakho kunye negqwetha elikhethekileyo, ukungafihli kunye nokulingana. Fumana ukoneliseka kwaye ucebise abanye kwifemu yethu yezomthetho.
siya kukunceda kuwo nawuphi na umba kunye neengxabano
Ifanelekile yamatyala antsonkothileyo, Kulula kubathengi bamanye amazwe, abaneminyaka engama-35 yokufumana amava omthetho waseDubai
Amanqaku e-UAE asemthethweni
Ungalongeza njani amabango oKonzakala oonozakuzaku e-Dubai okanye e-United Arab Emirates?
Inani lokufa kwengozi yemoto kwi-UAE kwiinyanga ezisibhozo zokuqala ze-2014 yayingama-463, ingxelo ye-Ministry of Interior icebisa. Ukujika ngesiquphe, isantya esiphezulu, ukusilela ukujonga umgama okhuselekileyo kunye nokunye ukwaphulwa kwemithetho yendlela yaba zezona zizathu zixhaphakileyo zeziphumo ezibulalayo. Nangona ukuncipha kokwenzakala okunxulumene nezithuthi kuye kwabonwa,
INkqubela phambili yamagqwetha e-UAE ekuqokeleleni amatyala
Ioyile enkulu kunye negesi, inkonzo okanye izakhiwo, ikakhulu, ziya kuthi zolule izibonelelo zazo zokuhlawula kodwa zihlala zihlawula ityala labo ngamagqwetha e-UAE. Ukuziphatha kwentlawulo yeefemu zikazwelonke kufanelekile kodwa kuya kwahluka kakhulu ukusuka kwelinye icandelo ukuya kwelinye. Imiqathango yokuhlawula kwi-UAE ibiziintsuku ezingama-30. Nangona kunjalo, baya behlala behlala bekhona
Ngaba ulixhoba lokusela kunye neengozi zokuqhuba e-UAE
Ukusela kunye neengozi zokuqhuba kwi-UAE akuvumelekanga kwaye enye yezona ziganeko zibukeleyo kurhulumente. Ngokuchaseneyo nezinye iindawo, i-UAE ayinamda osemthethweni wotywala egazini. Abenzi bobubi banokuvalelwa ukuya kutsho kwiiyure ezingama-48 kwaye umqhubi kuya kufuneka akhuphe umchamo kwaye
Ukukhetha elona Gqwetha loqhawulo mtshato eDubai
Xa iingxaki zomtshato zifikelela entloko kwaye nigqibe ekubeni niqhawule umtshato, ukufumana igqwetha linyathelo lokuqala elibalulekileyo. Ngaphambi kokuba ukhethe elona gqwetha lilungileyo kwimeko yakho, uya kufuna ukukhumbula ukuba ayingawo onke amagqwetha adalwe alinganayo. Uzakufuna kwakhona umntu oyaziyo indlela yokuqhuba inkqubo yoqhawulo-mtshato
Uyintoni umthetho weNgqesho kwi-UAE
Umthetho e-UAE wokuqeshwa kunye nokusasazwa awuguquki, akukho ndawo yothethathethwano xa inkampani ikulungele ukwamkela abasebenzi ixesha elifutshane. Naliphi na ixesha lesaziso elifutshane lesivumelwano alinakunyanzeliswa kwishishini. Ukupheliswa kwengqesho, umthetho wezabasebenzi wase-United Arab Emirates uthi
Iingcebiso ezi-5 eziluncedo zokuNqanda ezona ndlela ziqhelekileyo zolwaphulo-mthetho kwi-Intanethi
I-Cybercrime ibhekisa kwikhomishini yolwaphulo-mthetho apho i-intanethi iyinxalenye ebalulekileyo okanye isetyenziselwa ukuququzelela ukuphunyezwa kwayo. Lo mkhwa uxhaphakile kule minyaka ingama-20 idluleyo. Iziphumo zolwaphulo-mthetho lwe-intanethi zihlala zibonwa njengezingenakuguqulwa kwaye abo baba ngamaxhoba. Nangona kunjalo, kukho amanyathelo onokuwathatha
«Ngaphambilini Okulandelayo »
Inkundla yoSapho eDubai
Khetha iiFemu zoMthetho
AbaThengi bamazwe aphesheya
Jonga uMatyala oLwaphulo-mthetho
Ulwaphulo-mthetho kunye noBulungisa boLwaphulo-mthetho
Inguqulelo yezomthetho yeArabhu
Amagqwetha asekuhlaleni e-UAE
Amagqwetha ethu kunye namagwebu eono asentshona nangommandla afundile kwaye azilolonga kumazwe awahlukeneyo nakwimimandla ephakathi yolawulo lwasempumalanga. Unemibuzo malunga neenkonzo zethu? Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi.
Indlela yesikhululo seenqwelomoya, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Copyright © 2022 Law Firms Dubai | Ixhaswe yiCopper Communications
isikhanyeli | Migaqo nemiqathango